UMargarita koroleva - omunye izazi edume kunazo Russian. Ubani, uma kungekhona wakhe, ukwazi konke mayelana ukuncipha. Kusetshenziswa kanye besusa Kilos extra, izinkanyezi eziningi show lebhizinisi, kuhlanganise Basque, Babkin, Vinokur futhi Valeria.
Amandla ku "Izindlela ingilazi"
Mina ngokwami, ngangikuthola ngempela Ukudla Margarity Korolevoy, engasetshenziswa kalula ngokuthi "inkomishi indlela." Ingqikithi yale ekudleni ukusetshenziswa eziningi kangaka ukudla njengoba kufanelekile ingilazi eyodwa (ngamanye amagama, 250 gr.). Nokho, i-amadoda sibalo lisetudlwana - ngesidlo esisodwa kulingana 300 g. Futhi, ukudla okunjalo Margarity Korolevoy okuhloswe ukuba ngakususi konke imikhiqizo "elimazayo ', okungukuthi ethosiwe, okunamafutha, ezinoshukela, ufulawa, ngibhema futhi anosawoti omningi kakhulu. Ngakho, imikhiqizo kufanele kuphela eziwusizo. Kumele kube khona kahlanu ngosuku, ngokuvumelana indlela inkomishi lefanako. Yini ebaluleke, ngesikhathi Ukudla kufanele uphuze uketshezi oluningi, okungukuthi 2-2.5 amalitha ngosuku. Kuyadingeka ukuba kusheshiswe izinqubo umzimba futhi excretory. Kungenzeka futhi sichithe isonto lonke lokuzila ukudla ngosuku, kodwa akusho lokho ngempela. Ngesinye isikhathi uye wazama ukushumayela lokhu Ukudla ngingasho ukuthi kwamukeleka kalula nesisindo, siqala kancane, kodwa baqala ancibilike.
Mono-Ukudla "izinsuku 9"
Enye Ukudla Margarity Korolevoy ingenye eziphuthumayo, lapho ungalahlekelwa ngamakhilogremu ezimbalwa ezinsukwini 9 nje. Lokhu monodiet uhlobo okuyinto inezingxenye ezintathu ezihlukene. Izinsuku ezintathu zokuqala nawe ungadla kuphela irayisi abilisiwe. Ngenxa yalesi inkomishi irayisi kusihlwa kufanele ofakwe amanzi, futhi ekuseni ukupheka imizuzu 10-15. Figure kumele ihlukaniswe izigaba eziningana (kulapho, ngcono), lona wamuva kumele kube kungakapheli 19,00. Ngo ezinsukwini ezintathu ezizayo, udinga ukudla 1 kg inkukhu nsuku zonke. Ngaphambi Bilisa inkukhu, kumele bahlanza zesikhumba namafutha. Ukupheka abawudingi usawoti kungezwa isinongo. Ekugcineni ngo zokugcina ezintathu, nawe ungadla imifino, fresh noma abilisiwe. Ivolumu usuku - 800 amagremu. Yidla imifino kuwufanele izikhathi eziningana ngosuku in izingxenye ezincane.
Kuyaphawuleka ukuthi ekudleni Margarity Korolevoy izinsuku 9 kuhlanganisa ukuphuza uketshezi oluningi. Kungcono ukuphuza ngosuku mayelana ketshezi 2,5-3l. Lokhu kungase kube amanzi avamile distilled noma itiye eliluhlaza. Ungakwazi uphuze isigamu kuphela sehora ngaphambi ukudla hhayi ngaphambi amahora nesigamu ngemva kokudla.
Ukuze umphumela kwesisindo kwaba ngisho kuswelekile kakhulu ukuba afeze umsebenzi elula nsuku zonke. Uma ingangqubuzani yonke imithetho yokudla ke izinsuku 9 ungalahlekelwa 6-7 kg.
UMargarita koroleva is monodiet wathola udumo phakathi dieters eziningi, wathola udumo, hhayi nje phakathi kwabacebile nabadumile. Kwaba sezinsuku ezingu-9 kuye Ukudla, ngokusho kwabanye survey, kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe ukunciphisa umzimba fast.
Enye Ukudla Margarity Korolevoy lakhiwe ngqo izinkanyezi show-ibhizinisi, abangenayo nesikhathi esanele sokuzilungiselela ukudla okunempilo. Ibizwa ngokuthi "orange-iqanda." Imenyu silula: ekuseni kini okumelwe udle eyodwa orange, futhi ngemva kwehora elilodwa amaqanda abilisiwe ngaphandle isikhuphasha. Khona-ke, ngemva kwehora kumelwe ngiphinde ngiyidle i orange bese ukuqhubeka alternation imikhiqizo, ungakhohlwa ukuthi esidlweni sokugcina kungakapheli 18.00-19.00. Ukunamathela ukudla okunjalo Kufanele ibe mide, izinsuku 9-10 kwanele ulahlekelwe esibalulekile ukupheda owengeziwe. UMargarita koroleva kule ukudla nakho akusho sephule izimiso zayo futhi uncoma ukuphuza uketshezi oluningi. Uma kakhulu ufuna amnandi, ungathatha 1 isipuni uju ngosuku. Phuma kusukela ekudleni kufanele ibe bushelelezi, musa nje hamba imikhiqizo abavamile. Ukuze silondoloze yalokho, kanye ngesonto kufanele ukuqhuba osenyameni ngosuku kefir. Orange-Iqanda Ukudla ingasetshenziswa hhayi ningi than kanye ngenyanga. Kungcono bangayeki ukudla imisebenzi ngokomzimba: ukuqina noma ukungcebeleka mnene ekuseni ngeke neze ezifanele.
Sesame: izakhiwo ewusizo kanye contraindications
Jima kwesisindo kwasesiswini: entwasahlobo umsebenzi
Ukudla ngesikhathi exacerbation of kolwelwesi: indlela yokudla ehambisana nempilo zokwelapha
Ngesakhiwo elinamandla ukukhanga nobuhle kwabesifazane
Izinkumbulo Splash Punta Cana 5 * (Dominican Republic / Punta Cana): incazelo ingqalasizinda ehhotela, asesigabeni
Lokho liphatha mbumbulu udokotela? Mbumbulu - a ...